Soo dejisan Tagged 9.27.2 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Tagged
Tagged – a network bulshada caan ah si aad u hesho aqoon iyo xiriiraan adduunka oo dhan. software The kuu ogolaanayaa inaad u soo dirto a codsiyada saaxiib, dhaafsadaan fariimaha, heerka iyo faallo sawirada, baadhaan dadka isticmaala by shuruudaha ku qeexan, boostada entries, iwm peculiarity ee Tagged waa joogitaanka ciyaar oo aad ka arki kartaa bixiyeen photos of ciyaartoyda kale oo iyaga u qiimeeyaan la marks togan ama taban. Tagged ku jira qaybta gaar ah halkaas oo aad awoodo si aad u hesho xayawaan ah lacagta ciyaarta, aragto darajayn ciyaartoyda iyo guulahaaga. Tagged awood u aragto posts ka isticmaala iyo saaxiibada kale ee dhacdooyinka guud quudiyaan.
kulan gaar ah kuway isbarteen
set A weyn ee stickers iyo images GIF
Publication of posts iyo comments
search Advanced ee isticmaala
Connection of fursadaha VIP
Soo dejisan Tagged
Faallo ku saabsan Tagged
Tagged Xirfadaha la xiriira